Faka Abakaki ku-ArchLinux Ngesandla | Kusuka kuLinux
I-Adobe iyinkampani enikela ngemikhiqizo emihle kakhulu ehlobene ne-Design, Multimedia ne-Web Technology, futhi kuze kube manje, bonke bekufanele bakhokhe ilayisense ukuze bakwazi ukuyisebenzisa esikhathini eside esizayo. Photoshop, Flash, I-Dreamweaver, ziyisibonelo nje sayo.
Abakaki Akusona isinyathelo sokuqala leso I-Adobe da emhlabeni I-OpenSource, isivele ingenile KusukaLinux sasibonile njengoba ngonyaka odlule bashicilela umndeni wefonti obizwa ngokuthi Umthombo weSans Pro (yona leyo esetshenziswa yindikimba yethu: P) ngaphansi kwe- I-SIL Open Font License 1.1.
Nathi sabona ungayifaka kanjani en Ubuntu 13.04 futhi izindaba ezinhle ukuthi, futhi zikhona ezinqolobaneni I-AUR de I-ArchLinux, ngakho-ke kufanele kube ngokwanele ukufaka i-terminal:
Kepha kuvela ukuthi angiyisebenzisi Yaourt, futhi lapho uzama ukudala iphakheji yokufaka nge I-Makepkg, Bengidinga ukuncika okunye okuku-AUR. Ngamafuphi, umsebenzi omningi kakhulu.
Ya Ngasehlisile the kanambambili ngefomethi .deb ukuyifaka ku- UDebian Wheezy, kepha ngenxa yezinkinga zokuncika bekungenzeki. Ngesikhathi ngibhala le ndatshana, isayithi lamaBakaki laliphansi.
Kuvela ukuthi a .deb lokho enakho ngaphakathi amafayela okufanele abekwe kumafolda athile, esimweni se- Abakaki en / usr / share /, ngakho-ke ngombono, uma ngikopisha konke lapho kukhonjiswa khona ifolda ngayinye, ngingakhipha Abakaki. Kwakunjalo-ke.
Ngivule uziphu .deb usebenzisa Ark, futhi nganginefolda ebizwa ngokuthi kubakaki-sprint-28-LINUX64. Ngiye kuleyo folda ngavula uziphu kufayela idatha.tar.gz, Engangidala ifolda ebizwa ngokuthi usr. Ngiyitholile nge-terminal futhi ngagijima:
$ sudo cp bin / kubakaki / usr / bin / $ sudo cp -R lib / kubakaki / / usr / lib64 / $ sudo cp -R share / applications / brackets.desktop / usr / share / applications / $ sudo cp share / icons /hicolor/scalable/apps/brackets.svg / usr / share / icons / hicolor / scalable / apps /
Ngemizuzwana embalwa ngibe nezithonjana ze Abakaki kwimenyu, kepha lapho ngigijima akwenzekanga lutho. Ngikwenze ngokusebenzisa i-terminal futhi yaqala ukuphonsa amaphutha:
/ usr / lib / kubakaki / kubakaki / iphutha ngenkathi kulayishwa imitapo yolwazi eyabiwe: libplc4.so.0d: ayikwazi ukuvula ifayela lezinto ezabiwe: Alikho lelo fayela noma umkhombandlela / usr / lib / kubakaki / kubakaki: iphutha ngenkathi kulayishwa imitapo yolwazi eyabiwe: libnspr4.so .0d: ayikwazi ukuvula ifayela lezinto ezabiwe: Alikho lelo fayela noma umkhombandlela / usr / lib / kubakaki / Abakaki: iphutha ngenkathi kulayishwa imitapo yolwazi eyabiwe: libudev.so. 0: ayikwazi ukuvula ifayili lezinto ezabiwe: Alikho lelo fayela noma umkhombandlela
Konke okunye kwakulula, ngivele ngafaka i-terminal:
Futhi ngomumo. Sengivele nginabakaki abasebenza ngaphandle kokumosheka okungaka I-ArchLinux.
Ngizoyivivinya kahle bese ngiqhathanisa i- Abakaki vs SublimeText. 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka Abakaki ku-ArchLinux ngesandla
Ukuphawula nje: I-Yaourt ayikaze isetshenziswe ngeSudo. Bheka, ngiyiphindaphindile kuwe isikhangiso se-nauseam kepha ubonakala uphikelela ukukwenza ngendlela yakho. i-xD
Indoda, njengethiphu yokuphepha kahle kakhulu, kodwa woza, wonke umuntu uyazi ukuthi benzani ngekhompyutha yabo. Okokuqala, angiyisebenzisi iYaourt, kepha ngizokuthokozisa futhi ngikulungise lokho ku-athikili 😛
Kulokho ngiyavuma, wathi. Futhi, angiyisebenzisi i-SUDO ngakho-ke ngivame ukuyibona njengokucasula okukodwa, ngoba iqiniso ukuthi lolu hlelo lungakusindisa ezinkingeni, kepha kukodwa kuvame ukungakhululeki kune-Windows Vista UAC.
Okufanayo ngisho nakuSUDO. Kuyinkinga impela uma uqaphele ukuthi ezikhathini eziningi ufaka izinhlelo zokusebenza ezivame ukuthi zidinga izimpande.
Isizathu sokuthi kungani ungasebenzisi i-SUDO ku-yogurt?
Uma usebenzisa i-Sudo ku-yaourt uzibeka engcupheni yokunikeza umphathi imvume yesikripthi esithile esibi esitholakala ku-PKGBUILD. Ngaphandle kwalokho, i-yaourt ikucela iphasiwedi ye-sudo lapho ufaka iphakheji, ngakho-ke awudingi ukuyifaka kusuka ekuqaleni
Bengivele ngiyifaka kuTrisquel 😀 Ngingathanda ukuyabelana nobani engingabhalela i-imeyili ukuthi ngifake isandla
Ngabe ifonti esetshenziswa imenyu ingashintshwa?
Ngiyabona ukuthi kungani ikhasi lokulanda laliphansi… i-sprint-29 isiyatholakala, futhi ngeshwa uyabona ukuthi izinto sezishintshile, futhi nemiyalo yokufaka kulokhu okuthunyelwe ayisasebenzi. Elaaaaav, isikhathi sokuvuselela 😉
Hahaha, yilokho engikukho ..
Uma uqinisile, yize futhi kungashintshi okuningi, nokusebenzisa ifolda yokukhetha lapho uvula ifayili .. Noma ngilisebenzisa .. Uma ubuyekeza okuthunyelwe ngizobona ukuthi ngenze izinyathelo ezifanele hahaha
Mngani, kufanele ucacise ukuthi lowo mugqa ukukhonze kuphela kukhompyutha yakho, njenge-newbie ngiwusebenzise futhi angikwazanga ukuqala isistimu yami ngoba ifayili lami belingu-libudev.so.0.13.1 XD.
Sengivele ngiyilungisile, bekuvele kushintsha i-symlink.
Sawubona, indatshana yinhle kakhulu, ngiyabingelela futhi ngikumema ukuthi uzame i-BSD.
Ngiyabonga kakhulu, le ingisizile, kepha ukuyenza igijime ku-fedora 18 😀
Lapho ngizama ukulandela izinyathelo zokufaka kulayini womyalo ngithola iphutha elilandelayo:
Sudo cp -R lib / kubakaki / / usr / lib64 /
cp: ayikwazi ukwenza `stat 'ku-" lib / kubakaki / ": Ifayela noma umkhombandlela awukho
futhi lapho ngivula i-Brackets.Release.0.42.64-bit kufolda yedatha / usr / not figure lib nor lib / brackets /
Futhi ukufakwa kombhalo ophansi akungisebenzeli. :::: ivula uhlelo kepha ingalokothi ilukhombise… .. hhayi ngisho nokusetshenziswayo kufolda efanayo.
Yosbanis Vicente kusho
Sawubona, ngidinga usizo ngalokhu kufakwa kubakaki, kwenzeka into efanayo kimi njengoFederico futhi angazi ukuthi ngenzeni, ngiyazi ukuthi sekuyisikhashana selokhu kwashicilelwa kodwa angitholi enye indatshana ezongisiza . Ngiyacela uma othile engangisiza.Ngiyabonga
Phendula uYosbanis Vicente
Ngenguqulo yakamuva uyivula nge-zip kuphela nge-ARK, vula i-terminal ku-opt esefolda osanda kuyivula futhi uyisebenzise:
Sudo cp -R kubakaki / opt
futhi ngomumo! 🙂